Jinsiyadda Antigua iyo Barbuda - NDF single
Jinsiyadda Antigua iyo Barbuda - Sanduuqa Horumarinta Qaranka (NDF) oo keliya
Jinsiyadda Antigua iyo Barbuda - Sanduuqa Horumarinta Qaranka (NDF)
Sanduuqa Horumarinta Qaranka (NDF) waa sanduuq aan macaash doon ahayn oo ay hoos imaanayso baarlamaanka baarlamaan ahaan iyada oo loo marayo warbixin lix biloodle ah oo la horgeeyo baarlamaanka si faahfaahsan oo ku filan si loogu oggolaado daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka. Sanduuqa waxaa sidoo kale hubin doona shirkad caalami ah oo xisaabaadka ka shaqeysa.
Waxaa lagu aasaasay qodobka 42 (2) ee Sharciga Maamulka Maaliyadda 2006 ujeeddada loo leeyahay in lagu maalgeliyo mashaariicda ay maal-galiso dowladda, oo ay ku jiraan shuraakada ganacsiga ee dowladda iyo maalgashiga sadaqada.
Qaadashada muwaadinimada sida ku xusan xulashada maalgashiga NDF waxay u baahan tahay tabarucaad Sanduuqa Horumarinta Qaranka ugu yaraan ugu yaraan $ 100,000 $ codsikiiba. Tabaruciddu waa qaab lacag bixin hal mar ah.
Codsadaha aasaasiga ah waxaa ka mid noqon kara lammaanaha, carruurta ku tiirsan iyo waalidiinta ku tiirsan da'da 58 sano inta lagu jiro dalabka iyada oo aan lagu darin tabarruc dheeraad ah oo NDF loo baahan yahay, in kasta oo dowladda iyo khidmadaha dadaalka ay mudan tahay in la bixiyo qof walba oo lagu qeexay qeybta khidmadaha.
Habka codsigu waa cadaalad toosan foomamka codsiga waxaa laga heli karaa wakiilka idman maxalliga ah, kaasoo ruqsad ka haysta Unugta Maalgashiga (CIU).
Markaad soo gudbiso dalabkaaga waxaa lagaa codsan doonaa inaad bixiso khidmadaha dadaalka oo dhan iyo 10% lacagta khidmadaha dowladda. Markaad hesho warqad oggolaansho, waxaa lagaa codsan doonaa inaad bixiso isku-dheellitirka khidmaddaha dawladda, khidmadaha baasaboorka iyo tabarucaaga. Khidmadaha waxaa si toos ah loosiiyaa waaxda waxaana tabarucaada waa in lagu sameeyaa Sanduuqa Gaarka ah ee Dowladda muddo 30 maalmood gudahood ah.
Markii la helo, shahaadada diiwaangelinta Jinsiyadda waxaa la siinayaa codsadaha aasaasiga ah iyo xubnaha qoyskooda kuwaas oo loo gudbin doono xafiiska baasaboorka arjigooda baasaboorkooda iyo dukumiinti kasta oo la socda. Wakiilkaaga / wakiilkaaga idman ayaa kuu soo gudbin doona dukumintigaaga Baasaboorka iyo Jinsiyadda.
Munaasabadda ugu horeysa ee aad booqato Antigua iyo Barbuda waad qaadan kartaa dhaarta ama adkaynta daacadnimada ama waad booqan kartaa Safaarad, Gudiga Sare ama Xafiiska Qunsuliyada Antigua iyo Barbuda si aad u buuxiso shuruudaha inaad ku dhaarato dhaarta ama adkaynta daacadnimada.
Ku tabarucida Sanduuqa Horumarinta Qaranka
A. Codsada keliya, ama qoys 4 jira ama ka yar
$ 100,000 oo doolar
B. Qoyska 5 ama ka badan: -